တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း PARMA ၏ လမ်းကြောင်းခန့်မှန်းချက်များ | Myanmar Weather and Natural Disaster Informations
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း PARMA ၏ လမ်းကြောင်းခန့်မှန်းချက်များ
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း PARMA ၏ လမ်းကြောင်းကို ဟောင်ကောင်၊ အမေရိကန်၊ ဂျပန်၊ ကိုရီးယား၊ ဘေဂျင်း(တရုတ်)နှင့် ထိုင်ဝမ် တို့မှ ခန့်မှန်းသောလမ်းကြောင်းပြပုံဖြစ်ပါသည်။
ပုံတွင် မုန်တိုင်း အင်အားအဆင့် အရောင်များသာ ကွဲလွဲမှု အနည်းငယ်ရှိပြီး ဦးတည်ရာလမ်းကြောင်းမှာ ယေဘူယျအားဖြင့် ထိုင်ဝမ်ကျွန်းဆီသို့ ဦးတည်လျှက်ရှိကြောင်း မှတ်သားရပါသည်။
ပုံတွင် USA(ခရမ်းရောင်) နှင့် ထိုင်ဝမ် (အစိမ်းရောင်ဖျော့) တို့၏ လမ်းကြောင်းခန့်မှန်းချက်မှာ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံဘက်သို့ အနည်းငယ်ကပ်ပြီး ကျန်နိုင်ငံများ၏ခန့်မှန်းချက် လမ်းကြောင်းများမှာ ဖိလစ်ပိုင်နှင့် ဝေးရာမှခန့်မှန်းထားပြီး ၄င်းတို့အသုံးပြုသည့် ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်များအလိုက် ကွဲပြားခြားနားမှုရှိသည်ကို လေ့လာမှတ်သားရပါကြောင်း တင်ပြလိုက်ပါသည်။
Posted in Weather Alert, Weather News. Tags: PARMA, typhoon, weather. LeaveaComment »
« တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း PARMA – CAT-4 အထိဖြစ်လာနိုင်
အင်ဒိုနီးရှားတွင် ငလျှင်ပြင်းလှုပ် »